टिममा फर्किन लुकाकुले किन माफी माग्नु पर्यो ? - ramechhapkhabar.com
टिममा फर्किन लुकाकुले किन माफी माग्नु पर्यो ?
चेल्सीका फर्वाड रोमेलु लुकाकु माफ माग्दै चेल्सी स्क्वाडमा फर्किएका छन्। उनी बुधबार टोटेनह्याम विरुद्ध बुधबार हुने कार्वाओकप (लिग कप) को सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा टीममा हुने प्रशिक्षक थोमस टुचेलले जानकारी दिए।
उनले एक अन्तरवार्तामा चेल्सीसँग असन्तुष्टी जनाउँदै इन्टरमिलान फर्किन चाहेको उल्लेख गरेपछि प्रशिक्षक टुचेलले उनलाई आइतबार लिभरपुल विरुद्ध भएको इंग्लिस प्रिमियर लिगको टीमबाहिर राखेका थिए।
तर सोमबार भएको छलफलपछि लुकाकु माफि माग्न तयार भएपछि उनलाई टीममा राख्ने सहति भएको हो। इन्टरका लागि इटालीको सिरी ए उपाधि जिते लगतै उनी यस सिजनको सुरुमा चेल्सी आएका थिए। जसका कारण इन्टर समर्थक समेत उनीसँग रुष्ट बनेका छन्।
उनले आफ्नो अभिब्यक्ति प्रति माफि माग्दै भने ‘मलाई चेल्सीमा फिर्ता ल्याउनका लागि धेरै मिहिनेत गरिएको छ। तर फ्रस्टेसनमा केहि खराव अभिब्यक्ति दिन पुगेकोमा समर्थक र चेल्सीका समर्थकलाई पुग्न गएको चोट प्रति क्षमा माग्दै शतप्रतिशत क्लब प्रति समर्मीप रहेको जानकारी गराउँछु।’ उनले फुटबल खेल भन्दा बाहेक आफ्नो कुनै उदेश्य नरहेको बताए।
बंगलादेशले टेस्ट क्रिकेटमा पहिलोपटक न्युजिल्याण्डलाई हरायो
टेस्ट क्रिकेटमा बंगलादेशले पहिलोपटक न्युजिल्याण्डलाई हराएको छ। न्युजिल्याण्डविरूद्धको पहिलो टेस्टमा बंगलादेशले ८ विकेटको शानदार जित हात पारेको हो। घरेलु टोली न्युजिल्याण्डले दिएको ४० रनको लक्ष्य बंगलादेशले २ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो।
यसअघि पहिलो इनिङमा न्युजिल्याण्डले ३२८ रन बनाएको थियो। उसका लागि डेभन कन्वेले सतकीय पारी खेलेका थिए। २२७ बल खेलेका उनले १६ चौका र १ छक्कासहित १२२ रन बनाएका थिए। यस्तै हेनरी निकोलसले ७५ रन बनाउँदा विल योङले ५२ रन जोडेका थिए। बंगलादेशका लागि शोरिफुल स्लाम र मेहदी हसन मिराजले ३-३ विकेट लिएका थिए।
जवाफमा बंगलादेशले ४५८ रन बनाएर अग्रता लिएको थियो। उसका लागि मोमिनुल हकले ८८, लिथोन दासले ८६, महमुदुल हसन जोयले ७८, नजमुल हुसेन शान्तोले ६४, तथा मेहदी हसन मिराजले ४७ रन बनाएका थिए।
बलिङमा न्यूजिल्याण्डका ट्रेन्ट बोल्टले ४ तथा नेइल वाग्नरले ३ विकेट लिएका थिए। दोस्रो इनिङमा न्युजिल्याण्ड १६९ रनमा समेटियो। उसका लागि विल योङले सर्वाधिक ६९ रन बनाउँदा रोस टेलरले ४० रन जोडे। बाँकी खेलाडीले उत्कृष्ट रन बनाउन सकेनन्।
घरेलु टोलीलाई सस्तैमा रोक्न बंगलादेशका इबादोत हुसेनले सर्वाधिक ६ विकेट लिए। तस्किन अहमदले ३ विकेट हात पारेका थिए। जितको लागि ४० रनको लक्ष्य पाएको बंगलादेशले १६.५ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पुरा गर्‍यो। उसका लागि नजमुल हुसेन शान्तोले १७ रन बनाउँदा कप्तान मोमिनुल हकले १३ रन जोडेर नटआउट रहे। टिम साथी र काइल जामिसनले १-१ विकेट हात पारे।
खेलको प्लेयर अफ द म्याच बंगलादेशका एबाडोट हुसेन बने। उनले समग्रमा ७ विकेट लिएका थिए। न्युजिल्याण्ड र बंगलादेशबीचको दोस्रो टेस्ट आइतबार सुरू हुनेछ।